Horudhac: Manchester United vs Southampton… (Red Devils oo raadinaysa inay dib ugu soo laabato waddada guulaha ee Premier League) – Gool FM
Haaruun February 2, 2021
(Manchester) 02 Feb 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa raadinaysa inay dib ugu soo laabato waddada guulaha ee horyaalka Premier League iyagoo sii wadaya kal ciyaareedkooda 2020-21.
Man United ayaa garoonkeeda Old Trafford caawa goor dambe xilliga geeska Afrika ku soo dhoweynaysa naadiga Southampton.
Red Devils ayaa kaliya hal dhibic ka heshay labadii kulan ee ugu dambeeyay ee horyaalka, halka kooxda Southampton ay la kulantay 3 guuldarro oo xiriir ah horyaalka Premier League si ay ugu dhacdo kaalinta 11-aad ee kala sarraynta horyaalka.
Saacadda ay ciyaarta billaabaneyso: 11:15 Habeennimo xilliga geeska Afrika
Laacibka khadka dhexe ee Kooxda Manchester United, Scott McTominay kaasoo la bedelay kulankii Arsenal ee Sabtidii sababo la xiriir calool xanuun ayaa haatan taam u ah inuu ciyaaro ciyaarta caawa.
Eric Bailly ayaa bedeli kara Victor Lindelof, kaasoo ku dhibtoonaya inuu ciyaaro labo jeer maalmo kooban gudahood dhibaato dhabarka ah awgeed.
Southampton ayay u badan tahay inay ka maqnaan doonaan Theo Walcott, Ibrahima Diallo iyo Oriol Romeu maxaa yeelay waxa ay qabaan dhaawacyo cusub.
Kyle Walker-Peters, Jannik Vestergaard iyo Mohammed Salisu ayaa ka mid ah ciyaartoydii markii horeba kooxda ka maqnayd.
>- Manchester United ayaa guuldarro la’aan ah (unbeaten) sagaalkii kulan ee ugu dambeeyey oo ay horyaalka Premier League la ciyaartay Southampton, waxaana ay guuleysatay 4 kulan halka ay barbaro galeen 5 kulan.
>- Kooxda Manchester United ayaa minin iyo marti u garaaci kara Southampton markii ugu horreysay horyaalka tan iyo xilli ciyaareedkii 2012-13.
>- Man United ayaa guul soo laabasho ah ka gaartay Southampton horyaalka Premier League, waxaana kulankii ugu dambeeyey horyaalka xilli ciyaareedkaan kaasoo ka dhacay garoonka St Mary ay United ku adkaatay 3-2.
>- Dhammaan afartii guuldarro ee horyaalka ku soo gaartay Man United fasal ciyaareedkan 2020-21 ayaa yimid iyadoo lagu ciyaarayay garoonkeeda Old Trafford, kaliya labo jeer ayay guuldarrooyin intaas ka badan horyaalka Premier League ku soo gaareen garoonkeeda xilli ciyaareedka, waana fasal ciyaareedkii 2013-14 oo ay garoonkeeda ku qaabisay todobo guuldarro iyo 2001-02 oo ay kula kulmeen lix guuldarro garoonkooda.
>- Waxa ay ka soo laabteen goolal lagu hoggaamiyey waana ay guulaysteen todobo kulan oo horyaalka Premier League ah xilli ciyaareedkan, laakiin dhammaan kulammadaas waxa ay ku ciyaarayeen meel ka baxsan garoonkooda.
>- Kaliya mid ka mid ah toddobadii gool ee Marcus Rashford uu ka dhaliyey horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan ayuu ku dhaliyay garoonka Old Trafford.
>- Bruno Fernandes ayaan gool dhalin ama caawin shantiisii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League, waana heerkiisii ugu xumaa tan iyo markii uu sanad ka hor ku soo biiray Man Utd.
>- Saints ayaa halis ugu jirta inay guuldarro la kulanto afar kulan oo xiriir ah horyaalka Premier League markii ugu horreysay tan iyo bishii April ee sanadkii 2018.
>- Kaliya waxa ay heleen hal guul iyo saddex gool siddeedoodii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaareen horyaalka Premier League.
>- Southampton ayaa dhalisay kaliya labo gool oo horyaalka Premier League ah sanadkan 2021, waana kuwa ugu yar.
>- Waxa ay u baahan yihiin inay hal mar shabaqooda gool ka ilaashadaan horyaalka Premier League si ay u barbareeyaan rikoorka sagaal jeer oo ay shabaqooda gool ka ilaashadeen xilli ciyaareedkii la soo dhaafay.
Horudhac: Wolverhampton Wanderers vs Arsenal… (Waxyaabaha aad uga baahan tahay inaad ka ogaato kulanka caawa ka dhacaya garoonka Molineux)